Ikhaya AMASARS STARS I-Denis Cheryshev Ingane Yendaba Yabantwana Plus Untold Biography Facts
I-LB ibonisa iNdaba Egcwele Yeseyili YaseRashiya eyaziwa kakhulu ngesiteketiso; "I-2018 World Cup Hero". Indaba yethu ye-Denis Cheryshev Childhood kanye ne-Untold Biography Facts ikulethela i-akhawunti ephelele yemicimbi ephawulekayo kusukela esikhathini sokunganeka kuze kube yimanje. Ukuhlaziywa kuhilela indaba yakhe yokuphila ngaphambi kokudumisa, impilo yomndeni / isizinda, imvelaphi yomndeni kanye namaqiniso amaningi we-OFF-Pitch (angaziwa kakhulu ngaye).
Yebo, wonke umuntu uyazi ngemigomo yakhe kwiNdebe yoMhlaba yeFIFA 2018 ehlala ezweni lakubo. Kodwa-ke, abalandeli abambalwa kuphela abawazi okuningi nge-Bio ka-Denis Cheryshev okuyinto ejabulisa kakhulu. Manje ngaphandle kokunye okulandelayo, ake siqale.
Denis Cheryshev Childhood Indaba Plus Untold Biography Imininingwane -Isiqalo sokuphila
UDenis Dmitriyevich Cheryshev wazalwa ngosuku lwe-26th kaDisemba 1990 eNizhny Novgorod, eRussia. Wazalelwa uyise, UDmitri Cheryshev owayengumdlali webhola laseRussia futhi manje ungumphathi.
UDenis wakhula nomfowabo omncane uDanila kodwa wachitha ingxenye enkulu yobuntwana noyise othandekayo, ngokungafani nonina. Ngezansi isithombe sobabili nobaba.
Kusukela esemncane, uDenis wayenesiqiniseko sokuthi uzoba umdlali webhola esikhathini esizayo. UDenis walandela ezinyathelweni zikayise futhi wathokoza ibhola. Ubaba wakhe uDmitri Cheryshev, ngakolunye uhlangothi, wasiza ukubeka isisekelo esidingekayo ukuze abone indodana yakhe ethandekayo ngamaphupho akhe ayengelona iphutha elidlula. UDmitri ubaba wakhe waba ngumdlali odumile weChristian Dynamo Moscow ngaphambi kokuthuthela unomphela eYurophu. Ukuhlala kwakhe eYurophu kwathonya isizinda somndeni wakhe.
Denis Cheryshev Childhood Indaba Plus Untold Biography Imininingwane -Ukuphila iSpanishi
Ngenkathi uDenis eneminyaka emihlanu ubudala, ubaba wakhe owayengumdlali webhola lezinyawo wathola isipho esivela kuqembu leSpain, Sporting de Gijón. Dmitri wamukela lesi sipho, wasuka eRussia futhi wathuthela eSpain nomndeni wakhe. Lapho ehlala eSpain, wabona ukuthi ukuvimbela ulimi kwakuyinkinga enkulu futhi inselele umkakhe namadodana akhe, ikakhulukazi uDenis owayezobhalela esikoleni sebhola. Ukwazi ukuthi kungabangela kanjani ukungalungi, uDenis kwadingeka afunde iSpanishi masinyane.
UDenis omncane kwakudingeka aye esikoleni samalungiselelo eSpanishi lapho afunda ulimi lwesiSpanishi nomfundisi wakhe.
Phakathi nezinyanga ezimbalwa zokuqala, wayengakwazi ukuqonda izwi eSpanishi ngaphandle kosizo lomhumushi.
Noma kunjalo, esikhathini esithile kamuva, uDenis omncane wayejwayele isiko laseSpain futhi wafunda indlela yokukhuluma ulimi lwesiSpanishi ngokushelelayo njengoba isakhamuzi sasekhaya senza.
Denis Cheryshev Childhood Indaba Plus Untold Biography Imininingwane -I-Career BuildUp
Esikhathini esithile emva kokuthutha nokuqeqeshwa kwezilimi zaseSpanishi, uDenis omncane waqala ukuya esikoleni semidlalo yezemidlalo ye-Sporting FC, lapho uyise ayedlala khona ngaleso sikhathi. Wayeneminyaka engu-6 ubudala lapho ejoyina i-Sporting Gijon academy, ehlala lapho kuze kube yi-9.
UDenis Cheryshev kungekudala ulandela ubaba wakhe eqenjini lakhe elilandelayo, uBurgos, engena ohlelweni lwentsha yakhe eneminyaka engu-9 ngonyaka we-2000. Ngemuva kweminyaka emibili edlala eBurgos, i-Real Madrid yabiza. U-Denis Cheryshev ujoyine i-Real Madrid njengoba ekhonjwe njengethalente elihle ngesikhathi evivinywa. Ngaphansi kweDenis Cheryshev encane ngekhanda lakhe lokuqala le-Real Madrid.
UDenis Cheryshev uyingxenye yeRe Real Madrid iminyaka engu-14, ejoyina iqembu ngesikhathi se-12. Enkampanini yentsha, wazibonela ekhula ngokushesha kusukela entsha esemncane kuya komuntu omdala.
Ku-2009, uDenis Cheryshev wagijima endaweni yesehlakalo neqembu B futhi wabamba imigomo ye-22 emidlalweni ye-109 ngaphansi kokufundisa Zinedine Zidane. Emuva ngaleso sikhathi, wanikezwa ngokuthi "I-Best Shooter eThekwini le-Real Madrid Youth. "Kamuva, wathola iqembu eliphakeme le-Real Madrid.
Kungani Ashiya I-Madrid: UDenis Cheryshev ovezwe ngezansi wadlala imidlalo emibili yeqembu le-Real Madrid ngaphambi waqala ukufudumala ibhentshi ngenxa yokuncintisana okunzima phakathi kwabadlali abakhulu nabadlali abancane. Ngezansi i-Denis Cheryshev neTembu leMeyi leMadrid ngempela.
Ngemuva kokubonakala kabuhlungu izinyanga eziningana, uDenis wakhathazeka ngeqembu. Inqubo yokuthenga okokuqala nokuthuthuka kwesibili, iMadrid, ngeshwa, ithrekhi elahlekile yeCheryshev encane. Isicelo sikaDenis sokushiya iqembu siphikwa, samshiya ngesikhokhelo sokuboleka imali.
UDenis wathola indlela yakhe eya ekubonisweni kwemalimboleko engamashumi amathathu eSvilla, Villarreal naseValencia. Ekugcineni wajoyina uVillarreal ngemuva kokusungula isivumelwano esiphezulu ku-2016.
I-Russia 2018 World Cup Fame: UDenis Cheryshev udumile lapho eqhuma e-2018 FIFA World Cup. Ngaphandle kokubhala okuningi, ukuphakama kwakhe udumo kufingqiwe esithombeni ngezansi.
Bonke abanye, njengoba besho ukuthi, manje umlando.
Denis Cheryshev Childhood Indaba Plus Untold Biography Imininingwane -Ukuphila Ubudlelwano
Yebo, angeke abe mnandi njengaye Fyodor Smolov okufanekiselwe ngenhla nomkakhe wangaphambili, kodwa uDenis Cheryshev uqinisekile ukuthi ungena esikalini se-10 abantu bezemidlalo baseRussia abafisa kakhulu futhi sikunikeza isizathu salokhu. Lesi sikhala asizange sitholwe ngenxa yokusebenza kwakhe eRussia 2018 FIFA World Cup, kodwa ngenxa yemicabango yakhe yaseYurophu. Iqiniso liwukuthi, amantombazane, bayakwazisa i-Denis 'Yurophu yokucabanga ngenxa yokuthi uyasenesikhathi sokubhala.
Ekhuluma ngezintandokazi zakhe, owesifazane oyedwa kuphela uhlangana noDenis. Akakho omunye ngaphandle Cristina Cobo okufanekisiwe ngezansi nendoda yakhe. UCristina noDenis bebebuhlobo babo kusukela ku-2016.
Intombazane enhle kakhulu nomngane waseRussia omuhle kaDenis Cheryshev bafundela eMadre Ventura Sagrado Corazon Castellon naseYunivesithi yaseWest of Scotland ngaphambi kokubhalisa e-Universitat de Valencia lapho ehlangana khona nendoda yakhe. Udadewabo omuhle wamawele uMaria nomama wakhe okwamanje bahlala eSpan.
Njengasekuqaleni kokubhala, uCristina njengamanje ungummeli osebenza e-Arenal Sound eBorana, idolobha elisempumalanga yeSpain.
UDenis ufuna ukunyathelisa izithombe zezintombi zakhe uCristina Cobo ekhasini lakhe le-Instagram. Kodwa-ke, uDenis wayengakaze akhiphe imibono yamuva mayelana nezinhlelo zakhe zekusasa zikaCristina.
Denis Cheryshev Childhood Indaba Plus Untold Biography Imininingwane -Ingemuva Lomndeni
Umndeni kaDenis Cheryshev akuyona uhlobo olujwayelekile lwesiRashiya ngokuvamile uhlobo lokuhlala ekhaya futhi abangathandi ukuphuma endaweni yabo yokududuza ukuze baqale izinselelo ezintsha phesheya kwezilwandle.
U-Denis Cheryshev ungowomndeni onobufakazi obuhambisana nokukholelwa ukuthi bangaphumelela kwamanye amazwe ngaphandle kweRussia. UDenis Cheryshev oqala kusuka kunina, ubaba, umfowabo, udadewabo, umalume, u-aunty nezinye izihlobo bonke bafunde ukuzimela ngaphansi kohlelo lwaseRashiya.
Ukuze wenze lokho kukholwa kume, ngisho noyise kaDenis, UDmitri Cheryshev washiya umhlalaphansi emsebenzini wakhe ngaphandle kokungabaza ukuzinikela ekuthuthukiseni indodana yakhe ebhola njengoba kuboniswe esithombeni ngezansi.
Inhloso yayiwukumvimbela ukuba angahlali ekhaya. Ngesinye isikhathi, uyise kaDenis wanquma ukuba ngumqeqeshi webhola. Lesi sinqumo sikayise sasizuzisa umsebenzi kaDenis. Ngezansi isithombe sikaDmitri njengomphathi.
Ngokuqondene nomndeni wakwaDenis Cheryshev, umzuzu wokugcina wokulinda inkazimulo usuphelile. Ukuboniswa kukaDenis eRussia 2018 World Cup ngempela kuletha ukuguqula emsebenzini wakhe, impilo yakhe kanye nomndeni wakhe.
QAPHELA: Siyabonga ngokufunda iNdaba yethu yeDenis Cheryshev Childhood kanye namaqiniso angabonakali e-biography. Kuzo LifeBogger, silwela ukunemba nokulingana. Uma ubona okuthile okungabonakali kahle kulesi sihloko, sicela ubeke amazwana wakho noma uxhumane nathi !.